Taliska ciidanka la dagaalanka argigixisada Puntland oo wareejinaya shaqadii xoojinta ciidanka booliiska. | puntlandi.com
Taliska ciidanka la dagaalanka argigixisada Puntland oo wareejinaya shaqadii xoojinta ciidanka booliiska.
Taliska ciidanka la dagaalanka argigixisada Puntland ayaa maalinta berrito ah oo ku beegan 21-ka bishaan November waxay si toos ah u wareejindoonaan howshii xoojinta shaqada ciidanka booliiska Puntland, howshaas oo ay muddo bilo ah si kmg ah ugu xilsaartay madaxtooyada.
Taliyaha ciidanka la dagaalanka argigixisada, Gen, Muxyadiin Axmed Muuse iyo ciidankiisa ayaa qaar kamid ah magaalooyinka Puntland waxay ka wadeen howlgallo ammaanka lagu xoojinayay, iyagoo garabsiinayay ciidanka booliiska Puntland.
Howlgalladaas ay ciidanku wadeen ayaa laga gaaray guulo wax ku ool ah oo amniga lagu adkaynayay. Sarkaal katirsan ciidanka Booliska Puntland, ayaa u sheegay Puntlandi in ciidanka la dagaalanka argigixisadu ay muddo ku dhow shan bilood ah qeyb ka wadeen howlaha ciidanka booliiska, wuxuuna sheegay cabasho ciidanka booliiska ka timid.